Lahatsoratra momba an'i Meksika
Inona avy ireo tranombakoka be mpitsidika indrindra any Mexico City?
Enga anie 1, 2022 Shubham Sharma Meksika, zavatra atao
Betsaka ny azo ianarana avy amin'ny tantara!!! Ny fitsidihana tranombakoka na toerana manan-tantara dia afaka manitatra ny faravodilanitrao sy ny fahatakaranao ny tontolo iainanao. Tanànan'ny Tranombakoka. Voalaza fa manana tranombakoka maherin'ny 150 ny tanànan'i Mexico ary tsy misalasala aho izany isa izany.
Iza amin'ireo mpandraharaha mpizaha tany no mandeha any meksika?
Aprily 25, 2022 Shubham Sharma Meksika, Travel
Meksika dia anisan'ny firenena be mpitsidika indrindra eran-tany araka ny filazan'ny World Tourism Organization, ary izy no firenena faharoa be mpitsidika indrindra any Amerika, aorian'i Etazonia. Meksika no laharana fahenina be mpitsidika indrindra
Ahoana ny fomba fangatahana visa Meksika? Torolalana fohy
Aprily 18, 2022 Demi Meksika, visa
Izay te-hitsangatsangana any Mexico dia manana safidy telo hangataka visa any Mexico. Miankina amin'ireto safidy ireto: ny pasipaoronao, ny visa izay ao amin'ny pasipaoronao, ary ny fahazoan-dàlana hipetraka hafa tazoninao. Raha ianao
Ahoana ny fomba hahazoana visa Meksika ho an'ny Italiana? Torolalana fohy
Aprily 18, 2022 Demi Italiana, Meksika, visa
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Mexico?
Janoary 17, 2022 Demi asa, Meksika
Mexico dia hanjary toekarena mivoatra amin'ny taona ho avy. Ny sasany amin'ireo mpandalina ny Banky Iraisam-pirenena malaza dia naminavina ny ho avin'ny toekaren'i Mexico. Nanome fanambarana momba ny toekarenan'i Mexico izy ireo fa ho ny lehibe indrindra fahadimy amin'ny 2050.
Ahoana ny fomba hanofana trano any Mexico?
Janoary 10, 2022 Demi trano, Meksika
Mikasa hifindra any Mexico ve ianao? Misy karazana fiheverana maro hanohizana izany. Io no firenena faha-11 be mponina indrindra eto an-tany, miaraka am-pielezana sakafo, kolontsaina ary tontolo iainana. Tamin'ny taona 2004, nanatsara ny fahasalamany ny firenena
Ohatrinona ny vidin'ny dia mankany Mexico?
Janoary 10, 2022 Demi Meksika, Travel
Azo atao ve ny mandeha any Mexico amin'ny teti-bola? Ianaro ny fomba handaminana ny fitsidihanao an'i Yucatan Mexico -, torolàlana amin'ny vidiny, zavatra tokony hatao, toerana hipetrahana ary maro hafa. Jereo amin'izay ny tsara indrindra ho an'ny firenena! Tany i Mexico misy microclimates,
Sekoly sy rafi-pampianarana any Meksika
Janoary 6, 2022 Demi Meksika, am-pianarana
Raha mifindra any Meksika miaraka amin'ny fianakavianao ianao, ny fanapahan-kevitra lehibe hatrehinao dia ny hanohizana ny fianaran'ny zanakao. Ny sekoly sy ny rafi-pampianarana any Mexico dia mety tsy manana ny sekolim-panjakana matanjaka indrindra. Misy karazany ihany anefa
Tanànan'ny antoko 11 any Meksika
Novambra 19, 2021 Demi Meksika, zavatra atao
Raha mitady fialan-tsasatra amoron-dranomasina ianao ary toerana hanaovana fety fa tsy any Mexico no toerana mety indrindra. Ity ny lisitry ny iraika ambin'ny folo amin'ireo tanàna fety tsara indrindra any Mexico. Raiso ny safidinao amin'ireo tanàna ireo, manaova fety miaraka amin'ireo eo an-toerana sy ny hafa